23 October, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Hirshabelle ayaa sheegtay in la jooggo xilligii ay dadkeeda isu gurman lahaayen, maadaama Webiga Shabelle uu ku fatahay deegaano badan, dadkiina ku khasbay in ay guryahooda ka barakacaan.
Xasan C/qaadir Muudey, La taliyaha Qaybta Warbaahinta ee Madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay Webiga Shabelle oo ku fatahay qaybo ka mid ah Gobolada Hiiraan & Shabellaha Dhexe in uu culeys ku keenay nolosha dadka deegaanka.
La taliyaha oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dhibaatadaan ay tahay mid muuqato, ayna cadaymo u hayaan, sidaasi daraadeedna loo baahan yahay in gacan loo fidiyo dadka ay fatahaaduhu barakiciyeen.
Waxaa uu tilmaamay in la jooggo xilligii ay dadka Soomaaliyeed isu gurman lahaayen, gaar ahaan bulshada reer Hirshabelle, isagoona ugu baaqay in gurmad deg deg ahi lala gaaro dadkaasi, oo sida uu sheegay nolol adag ku sugan.
Xasan C/qaadir Muudey ayaa yiri "Waxaa la jooggaa xilligii ay dadka Soomaaliyeed is gargaari lahaayeen, gaar ahaan reer Hirshabelle, maadaama dadka dhibaatada haysato ay dadkooda yihiin. Maanta nolol adag ayay ku sugan yihiin dadkeena, waxaana wanaagsan in gurmad lala garab istaago."
Waxaa kaloo uu yiri "Wax yar oo aad bixiso waxay badbaadin kartaa dad badan oo maanta garabkaaga u baahan, nin kasta oo reer Hirshabelle oo wax yar bixiya ayaa ku filan badbaadada dadkeena."
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri "Wax yar oo wanaagsan oo aad u qabato deegaankaaga ama dadkaaga waxy lamid tahay adiga oo wanaajiyay Soomaaliya ama Soomaali dhammaanteed."
Muudey ayaa ku waramaya in dhibaatada aanay ku koobnayn fatahaadaha oo qura, balse sida uu sheegay ay macluul ka jirto deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Dhexe, isla-markaana uu reer Hirshabelle ugu baaqayo inay is gacan qabtaan.
"Dhibaatada fatahaado oo keliya kuma eka, waxaan xusuusinaya dadka reer Hirshabelle inay macquul ka jirto deegaanada hoos-tagga Mahadaay, Jowhar, Balcad, Cadale, Warsheekh, Raagaceele, Ruunirgood iyo Aadan Yabaal. Marka dhibka ma yara ee waa in loo wada gurmanaa dadkeena kuwooda dhibaatada wajahaya." Ayuu yiri Muudey.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya oo Talaadadii ka hadlay fatahaadaha ka jira Deegaanada Hirshabelle ayaa walaac ka muujiyay, waxaana uu hay'adaha gargaarka ee dalka ka hawlgalo uu ugu baaqay in ay gurmad gaarsiiyaan dadka ay fatahaaduhu saameeyeen.
Amar Culus oo la dhul-dhigay shacabka Magaalada Baydhabo
Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo magacaabay gudiga diyaarinta Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
the background of the new autonomy president Visits: 689055
Uhuru Kenyatta oo isku shaandheeyey golihiisa Wasiirada Visits: 177
Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab oo duqeyn lagu dilay + Magacyada Visits: 176